Ny Coronavirus dia miparitaka amin'ny olona tsirairay, rehefa misy olona mifandray amin'ny tsiambaratelon'ny olona voan'ny aretina. Ny trangan'ny otrikaretina dia misy fiantraikany amin'ny lalan'ny fifindrana mivantana. Ny mitafy saron-tava dia afaka misakana anao tsy hifoka ny tsimok'aretina ao anaty onjam-peo mivantana.Remember manasa ny tananao matetika izay mety hampitsahatra ny fidiran'ny otrikaretina amin'ny tananao.
Ny mason-tsofina KN95 dia azo ampiasaina indray amin'ny toe-javatra mahazatra. Raha toa ka simba sy rakitra ny saron-tava, dia tokony hosoloina avy hatrany.
Azo atao ve ny mampiasa mason-tsoavaly KN95 aorian'ny fanafoanana ny otrikaretina?
Nisy olona tao amin'ilay tambajotra nampiasa blower mahery vaika hitsoka nandritra ny 30 minitra ary notsindronana toaka ara-pitsaboana amin'ny fitrandrahana sy ny famafazana, avy eo dia nampiasa saron-tava N95 imbetsaka izy ireo.
Na izany aza, ny manam-pahaizana dia nanoro hevitra fa tsy hanao izany. Betsaka ny olona no mieritreritra ny hampiasa herinaratra herinaratra mavesatra hitsoka ny saron-tava mandritra ny 30 minitra, manapotika ny anatiny sy ivelan'ny saron-tava miaraka amin'ny alikaola ary manantena ny hamono ilay viriosy mipetaka amin'ny tavany izy io ary averina. Na izany aza dia hanova ny fibre fitivana ny saron-tava N95 ary tsy hilalao anjara fiarovana tsara.
Raha manao saron-tava N95 amin'ny toerana misy olona vitsy ny olona, ​​dia afaka mampiasa azy imbetsaka in-5 ny olona, ​​avereno any amin'ny toerana maina izany sy ny ventilate.Tsy mila mitraka sy manondraka toaka izy.
Raha toa ny olona ao amin'ny toerana be olona toy ny hopitaly dia tsara kokoa ny manolo azy matetika. Ny saron-tava fandidiana amin'ny ankapobeny dia tsy avela ampiasaina matetika.The 2-4 ora tsara indrindra.